Dramatic temperature change ရုတ်တရက် အပူချိန်အပြောင်းအလဲမှာ ဘာသတိထားရမလဲ............... ~ Latha Mobile 0945 000 1727
Dramatic temperature change ရုတ်တရက် အပူချိန်အပြောင်းအလဲမှာ ဘာသတိထားရမလဲ...............
1:59 AM ko pae Lay No comments
Posted by: Ko Myo on Sunday, April 27, 2014 Categories: ကျန်းမာရေး
1. ဆရာ နေပူထဲကလာပြီး ချက်ချင်း မျက်နှာသစ်ရင် ချေထောက်ရေလောင်းရင် အပူရှပ်ပြီး သေတတ် တယ်တို့၊ သွေးကြောပြတ်ပြီး သေတတ်တယ်တို့ ကြားဘူးပါတယ် ဟုတ်ပါသလား ဆရာ။
ဘယ်အရာမဆို ယုတ်တရက်အပြောင်းအလဲလုပ်တိုင်း ချောမွေ့မှုမရှိတတ်ပါ။ အပူချိန်သိပ်ပူရာကနေ သိပ်အေးတဲ့နေရာကို ရောက်တာနဲ့ လူ့ကိုယ်ခန္ခာကို သက်ရောက်မှုဖြစ်တာတွေကလဲ မခံနိုင်ဖြစ်သူတွေ ရှိတယ်။
• အပြင်အပူထဲကနေ လေအေးစက်ပေးထားတဲ့နေရာထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ ပြောင်းပြီ။ အရေပြားသွေ့ ခြောက် လာမယ်။ အရေပြားအပါးစားတွေဖြစ်တဲ့ မျက်စိ၊ နှုပ်ခမ်းတွေလဲ ခြောက်လာမယ်။ မျက်စိပိုးဝင်တာ၊ အသက် ရှူလမ်း ပိုးဝင်တာနဲ့ ကြွက်သား ကြွက်တက်တာတွေဖြစ်လာစေနိုင်တယ်။ ပန်းနာထသူ၊ လည်ချောင်းနာသူ၊ တုပ်ကွေးလိုဖြစ်သူ၊ ခေါင်းကိုက်၊ ကြွက်သားနာသူတွေများတယ်။
• လေအေးပေးထားတဲ့နေရာဌာနတွေမှာ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ပေးတဲ့ ဆရာဝန်တွေကနေ ၂၃-၂၅ ဒီဂရီ စီ မှာ ထားသင့်တယ်လို့ အကြံပေးပါတယ်။ ၁၉ ထိနည်းရင် ဆိုးနိုင်တာများတယ်။ တိတိကျကျ ပြော ထားတာကတော့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ မနက် ၁၁ နာရီအချိန် အခန်းတွင်းမှာ ၂၂့၅ ဒီဂရီ စီ ထားသင့်တယ်လို့ဖြစ်ပါ တယ်။
Heat stroke အပူဒဏ် ဘယ်လိုခံမလဲ ...............
Beat the summer heat အပူဒဏ်ကာကွယ်ရန် ................